“Waxaan Messi ka hortagay isagoo 16-jir ah, waxaanna dalbaday in la i baddelo” – Halyey Talyaani ah kabtanka Barcelona la barbar dhigay Maradona – Gool FM
(Italy) 30 Maajo 2020. Is barbar dhigga ku aaddan Diego Maradona iyo Lionel Messi ayaa dhowaanahan hadal hayntiisu ay korortay, waxaana maalmihii laga nasanayay kubadda cagta soo if baxay sheekooyin kala duwan oo labadan halyey ku saleysan.
Difaacii hore ee AC Milan, Alessandro Costacurta ayaa dib u xasuustay markii uu wajahay Lionel Messi kaddib ciyaar ay Milan la yeelatay Barcelona.
Costacurta ayaa daaha ka rogay inuu arkay waxyaabo badan oo ay ka simman yihiin halyeyada Argentina.
“Waxaan nasiib u yeeshay inaan Messi iyo Maradona labadoodaba aan ka hortagay,” ayuu xiddigii hore ee qaranka Talyaaniga u sheegay Sky Italia.
“Maradona waxaa qalad lagu galaayay 66 jeer ka hor inta ciyaaryahanka ka soo horjeeda aanan loo digin.
“Halkaas Leo wuu kaga duwan yahay, balse waxay ka simman yihiin labadooda hab fikirka iyo caqliga, iyo qaabka ay naftooda ugu qeexaan garoonka gudahihiisa, balse Messi wuu ka daggan yahay Maradona” ayuu yiri Difaacii hore ee Rosenneri.
“Markii ugu horreysay ee aan wajahay Messi, waxa uu ahaa 16-jir, waxaanna u heystay canug yar oo sameynaya wixii aan doonayay aniga.
“Balse rubac-saac kaddib waxaan Carlo Ancelotti ka dalbaday inuu baddel iigaga saaro ciyaarta.” ayuu yiri Alessandro Costacurta.